Sida Al-Shabaab ku xag-jireyso dhalinyarada Kenya oo la ogaadey [Akhri Xog muhiim ah]
By Wariyaha Garowe Online , Kenya
Dhalinyaro Kenyan ah oo lagu eedeeyay Al-Shabaab-nimo oo Maxkamad lasoo taagay
NAIROBI, Kenya - Wargeyska "The Kenyans" ayaa soo bandhigay qaababka kala duwan ee ay u isticmaasho Al-Shabaab xag-jireynta dhalinyarada u dhashay dalka Kenya, ee kusoo biirinayso safafka dagaalka ay kawado gobolka Geeska Africa.
- Shaqo mushahaar fiican -
Al-Shabaab ayaa u sameyso dhalinyarada balan-qaadyo kala duwan, oo ay baraha bulshada uga soo bandhigta shaqooyin mushahaaro fiican ku bixinayso gudaha Somalia.
Dhalinyarada ayaa marka ay yimaadaan Somalia la kulma wax ka duwan balan-qaadkii loo sameeyay, iyagoo la geeyo xeryaha tababarka kadibna halkaasi lagu askareeyaa.
- Baraha Bulshada [Social media] -
Kuwa dhalinyarada u qora Al-Shabaab waxay geliyaan baraha bulshada ee Internet-ka shaqooyin banaan, oo dhalinyarada Kenya kuwa baagamuundada ah soo codsada, kuwaasoo loo soo safriyo dhinaca dalka Somalia.
- Dagaalyahanada kasoo laabta Somalia -
Xubnaha katirsan Al-Shabaab ee kasoo jeeda Kenya ayaa markii ay tababarka qaataan ee kadibna ku laabtaan dalkooda ayaa loo adeegsadaa inay ka dhaadhiciyaan dhalinyarada ay saaxiibada ahaayeen inay ku biiraan Al-Shabaab.
Inta badan dhalinyaradan ayaa laga soo qoraa magaalooyinka xeebta ku yaalla ee Kenya, gaar ahaan Mombasa iyo Kwale, meelahaas oo la rumeysan yahay inay qaar kamid ah kuwii weeraray Dusit D2 hotel ay ka yimaadeen.
- Afduubka -
Wargeyska ayaa sidoo kale in mararka qaar dhalinyarada Kenya laga soo afduubo guryahooda. Tani ayaa dhacda marka ay diidaan inay la shaqeeyaan kuwa dadka u qora Al-Shabaab.
- Waxbarasho diimeed -
Arrinta kale ee caanka ayaa ah in dhalinyarada Muslimiinta ah ee u dhashay Kenya ay ka doontaan madaxda degaanada ay ku nool yihiin waqrad u ogolaanaysa inay cilmiga barashada diinta ah u aadaan meelo kale oo ka baxsan dalkooda.
Waxay kadib soo galaan Somalia, iyagoo u gacan gala Al Shabaab, waxaana la geeyaa xeryo oo labo sano lagu siiyaa tababar ciidan, iyadoo markii ay dhameystaan la dagaalgeliyo.
Al-Shabaab ayaa gudaha Kenya ka aas-aastay sanado kahor garab uga dagaalama, kaasoo ay hogaaminayaan rag u dhashay dalkaasi, oo tababar ku qaatey gudaha Somalia.
Weerar lagu qaadey saldhiga ugu weyn Mareykanka ee Somalia
Soomaliya 15.02.2019. 16:54
Saldhigga ayaa la rumeysan yahay inuu yahay halka laga qorsheeyo duqeymaha Mareykanka.
Sidee Ra'iisul Wasaaraha Somalia loogu soo dhaweysay Nairobi?
Soomaliya 28.01.2019. 13:50
Wararkii ugu dambeeyey baaritaanka weerarkii Nairobi [Dhageyso]
Afrika 22.01.2019. 17:57
Gaas oo ku gacan-sayrey Go'aankii Isimada Puntland [War-Saxaafadeed]
Puntland 04.01.2019. 02:31
Xerada ay Al-Shabaab ka furatay madaafiic lagu weeraray Villa Somalia
Soomaliya 14.11.2019. 09:35
Kenya oo bedeshay mowqifkeeda xiisadda kala dhaxeysa Soomaaliya
Afrika 28.02.2019. 12:38
Maamulka Somaliland oo soo saaray digniin ku aadan Vayrus dilaa ah 27.01.2020. 13:25
Farmaajo oo ku biiray hogaamiyeyaasha ku shirsan Asmara 27.01.2020. 12:51
Beesha Caalamka oo "aan ictiraafi doonin" doorashada Galmudug 27.01.2020. 11:20
Kobe Bryant: Waa kuma ciyaaryahanka ku dhintay shilka diyaaradeed? 27.01.2020. 09:32
Nabadoon caan ah oo lagu khaarijiyey magaalada Muqdisho 27.01.2020. 08:43
Farmaajo oo laba todobaad kadib socdaal kale ugu ambabaxay Asmara 27.01.2020. 08:04